जोर्नी खिइने समस्या के हो? कस्तो अवस्थामा जोर्नी प्रत्यारोपण गरिन्छ? खर्च कति लाग्छ? :: कमला गुरुङ :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
जोर्नी खिइने समस्या के हो? कस्तो अवस्थामा जोर्नी प्रत्यारोपण गरिन्छ? खर्च कति लाग्छ?
कमला गुरुङ शनिबार, चैत १२, २०७८, १२:०१:००
काठमाडौं– शरीरमा भएका जोर्नीहरु विभिन्न कारणले खिइने अथवा बिग्रिने समस्या हुन सक्छ। खिइएको अथवा बिग्रेको जोर्नी शल्यक्रियामार्फत् कृत्रिम जोर्नी राखेर उपचार गर्न सकिन्छ। जसलाई जोर्नी प्रत्यारोपण भनिन्छ।
घुँडा र हिपको जोर्नी खिइएमा हिँडडुल गर्न, बस्न, दैनिक कामहरु गर्न असहज हुन्छ। विभिन्न उपचार, थेरापीले सम्भव नभएको अवस्थामा जोर्नी प्रत्यारोपण गर्न सकिने राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका सिनियर कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन डा ऋषि विस्टले बताए।
जोर्नी प्रत्यारोपण भनेको के हो ? किन र कस्तो अवस्थामा गरिन्छ ? नेपालमा यो सेवाको अवस्थाका विषयमा हामीले डा विष्टसँग कुराकानी गरेका छौँ। उनीसँग गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
जोर्नी प्रत्यारोपण भनेको के हो?
– कुनै पनि जोर्नी खिइएर वा रोगका कारण कमजोर तथा बिग्रिने हुन्छ।
– कमजोर भएका ती जोर्नीलाई परिवर्तन गरि कृत्रिम जोर्नी राख्नुलाई जोर्नीको प्रत्यारोपण भनिन्छ।
– जोर्नी प्रत्यारोपण भन्दापनि जोर्नी परिवर्तन भन्नु उपयुक्त हुन्छ।
जोर्नी प्रत्यारोपण कसरी गरिन्छ?
– सबैभन्दा धेरै परिवर्तन गर्ने भनेको नितम्ब (हिप) र घुँडाको जोर्नी हो।
– उमेरअनुसार हिप खिइएको, रोगले गर्दा समस्या भएको अवस्थामा रोगबाट ग्रसित जोर्नीलाई काटेर फालिन्छ। र, त्यसमा नयाँ कृत्रिम जोर्नी राखिन्छ।
– अधिकांशमा पनि उमेरअनुसार जोर्नी खिइन्छ।
– घुँडामा परिवर्तन गर्दा खिइएको भागलाई काटेर फाल्ने वा सफा गरेर त्यसको बाहिर कृत्रिम जोर्नीको क्याप राखिन्छ।
कस्तो अवस्थामा जोर्नी प्रत्यारोपण गरिने हो?
– विभिन्न उपचार तथा थेरापीले निको नभएका जोर्नीहरुलाई परिवर्तन गरिन्छ।
– योभन्दा अघि खाने औषधि, फिजियोथेरापी र इन्जेक्सनले निको नभएको अवस्थामा मात्र जोर्नी प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ।
जोर्नी खिइने समस्या के हो? किन हुन्छ?
– घुँडा र हिपमा खिइने समस्या फरक हुन्छन्।
– घुँडा खिइएर गरिने प्रत्यारोपणमा ९० प्रतिशत उमेरअनुसार हुने परिवर्तनका कारण खिइने हुन्छ।
– बाँकी १० प्रतिशत चोटपटक, कुनै संक्रमण वा रोगले पनि जोर्नी खिइन सक्छ।
– जोर्नीसम्बन्धी रोगहरुकै कारण हिप जोर्नी खिइन्छ।
– नेपालमा धेरैजसोलाई हिपमा रक्तसञ्चार कम भएर हुने रोग पनि देखिन्छ।
नेपालमा जोर्नी प्रत्यारोपण सेवाको अवस्था कस्तो छ?
– नेपालमा यो सेवा सरकारी र नीजि दुबै अस्पतालमा उपलब्ध छन्।
– नेपालमा जोर्नी प्रत्यारोपण सुरु भएको धेरै भयो। तर, नियमित रुपले सेवा सुरु भएको ५ देखि ५० वर्ष भयो।
– राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा विगत ५ वर्षदेखि यो सेवा उपलब्ध छ।
जोर्नी प्रत्यारोपण कत्तिको खर्चिलो उपचार हो?
– कृत्रिम जोर्नी निकै महँगो हुने भएकाले जोर्नी प्रत्यारोपण खर्चिलो उपचार हुन्छ।
– हिप तथा घुँडामा राखिने सामानहरुको मात्रै दुई लाख रुपैयाँसम्म पर्छ।
– रिभिजन सर्जरी गर्दा झनै महँगो पर्न जान्छ।
– सरकारी अस्पतालमा साढे दुई लाखदेखि तीन लाख भित्रमा जोर्नीको प्रत्यारोपण हुन्छ।
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा जोर्नी प्रत्यारोपण गराउने बिरामीको संख्या के छ ?
– राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा करिब २०० जना बिरामीको जोर्नी प्रत्यारोपण भएको देखिन्छ।
– हरेक ओपीडीमा दैनिक ३/४ जना बिरामी जोर्नी प्रत्यारोपणका लागि जानकारी लिन आउँछन्।